स्थानीय तहमा ३६ हजार ६ सय ५४ प्रतिनिधि, महिला कति ? « Khasokhas Follow @khasokhasmag
स्थानीय तहमा ३६ हजार ६ सय ५४ प्रतिनिधि, महिला कति ?
गाउँसभामा को–को ?
नगरसभामा को–को ?
वडामा को–को ?
कति महिला जनप्रतिनिधि ?
कति दलित जनप्रतिनिधि ?
स्थानीय निकायबाट सञ्चालन भएका योजना तथा आयोजना अब स्थानीय तहले सञ्चालन गर्नेछन् । जिल्ला विकास समितिले सञ्चालन गर्दै आएको योजना तथा आयोजना जिल्ला समन्वय समितिले सञ्चालन गर्नेछ । गाविसबाट सञ्चालित योजना तथा आयोजना गाउँपालिका वा वडाले सञ्चालन गर्नेछन् । नगरपालिकामा पनि त्यस्तै हुनेछ । आर्थिक वर्ष ०७४-७५ को बजेट निर्माणका काम पनि स्थानीय तहले नै गर्नेछन् ।
निर्वाचन आयोगले ७४४ स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगको शनिबार बसेको बैठकले स्थानीय निर्वाचनका लागि सहजीकरण गर्न सबै स्थानीय तहमा ३ चैतभित्र कर्मचारी व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो । कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा सम्भव भएसम्म सोही सेवा समूहका कर्मचारी खटाउन भनिएको छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाका केन्द्रहरूमा मतदान केन्द्र पहिचान गर्ने काममा आयोग छ । मतदान केन्द्रहरू पहिचान गरेपछि मतदानस्थल तय हुने आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले बताए । नयाँ पत्रिका/योगेश ढकाल, टेकराज थामी
-प्रत्येक वडामा चार सदस्य : २६,७३२ (प्रत्येक वडामा महिला एक र अल्पसंख्यक/दलित एक सदस्य)
-महानगर, उपमहानगर र नगरसभामा दलित-अल्पसंख्यकबाट ३ सदस्य : ७८९ .